Cristiano Ronaldo Oo Taleefanka Kula Xiriiray Man United, Real Madrid & PSG – Garsoore Sports
Cristiano Ronaldo Oo Taleefanka Kula Xiriiray Man United, Real Madrid & PSG
Cayaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa baaraya fursadihiisa ah inuu ka tago Juventus xagaagan, waxaana ay isaga iyo wakiiladiisa la xiriireen kooxaha Manchester United, Real Madrid iyo Paris Saint-Germain si ay u arkaan haddii ay jiraan cid xiiseyneysa inay la wareegto.
Tababaraha cusub ee Juve Massimiliano Allegri ayaa isha ku haya inuu dib u habeyn ku sameeyo kooxdiisa, wuxuuna caddeeyay inuusan u arkin Ronaldo qeyb ka mid ah qorshihiisa garoonka Allianz Stadium, iyadoo cayaaryahanka reer Portugal uu ku faraxsanyahay inuu sidoo kale ka dhaqaaqo Turin.
Iibinta Ronaldo ma’ahan wax fudud sida aad moodeyso, maxaa yeelay mushaarkiisa badan iyo qiimaha ay Juve ku dooneyso ayaa meesha ka saari doona inta badan kooxaha adduunka. Sidaa darteed ESPN waxay leedahay wakiiladiisa ayaa arrimahaasi gacmaha ku qaadaya iyagoo la xiriiray kooxaha xiiseeynaya si ay u ogaadaan inay 36 sano jirkan siin karaan hooy cusub.
Wicitaanno ayaa loo diray United, Real iyo PSG si loo ogeysiiyo inay xiddigan ku heli karo qiimo sax ah xagaagan, iyadoo wakiilada Ronaldo ay doonayaan inay ka shaqeeyaan suurtagalnimada heshiis dhowaan dhaca.
Wicitaankoodii PSG waxay la kulmeen natiijo wanaagsan waxayna kooxda reer France durbaba bilaabeen inay kala hadlaan arrinka taasoo ka dhigan inuu Mauro Icardi u dhaqaaqayo dhanka kale – heshiiskaas ayuu Allegri uu aad u xiiseynayaa in la dhammaystiro. Dhanka kale, Jawaabaha ka imanaya United iyo Real ma weli cadda.
Ronaldo wali ma uusan gaarin go’aanka ugu dambeeya ee mustaqbalkiisa. Inkastoo uu u furan yahay inuu ka dhaqaaqo Juventus, sidoo kale ma diidi doono inuu sii joogo Turin, balse waxaa la rajeynayaa inuu ku saleeyo dookhiisa ugu dambeeya inuu guri wanaagsan helo.
Van De Beek Oo Laga Saaray Xulka Holland Ee Tartanka Qaramada Yurub
Ceballos: ‘Waa Macquul Inaan Real Ka Tago Balse Barca Kuma Biirayo’